पौराणिक कथा : बाहुन, ठग तथा बोका | नेपाली जनता :: Nepali Janta:
पौराणिक कथा : बाहुन, ठग तथा बोका
प्रकाशित मिति ५ जेष्ठ २०७५, शनिबार १३:४० लेखक नेपालीजनता
कुनै नगरमा मित्र शर्मा नाम गरेका एकजना अग्निहोत्री बाहुन बस्दथिए । माघको महिनामा अत्यन्त शीतल बतास चलिरहेको थियो । वातावरण कुइरोले डम्म ढाकेको थियो । आकाशमा बादल लागेको तथा फुस्स फुस्स पानी परिरहेको थियो । मौसम जाडोको कारण कष्टकर भएको हुनाले उनी कुनै गाउँमा गएर कुनै जजमानसित पशुको लागि याचना गर्दै भने,“जजमान, आउने औंसीको दिन मैले यज्ञ गर्नुछ । अत: मलाई एउटा पशु दान गर ।” बाहुनको याचना सुनेर एउटा दयालु जजमानले बाहुनलाई एउटा ह्ष्टपुष्ट तथा मोटो बोका दिए ।
मोटोघाटो भएको हुनाले त्यो बोका हिंड्नमाअसमर्थ थियो । लौरोले हाँक्न थालेपछि त बोका सोझो बाटो नहिंडेर यताउति गरेर पो हिंड्न थाल्यो । बोकाको यस्तो चाला देखेर बाहुनले हिंड्न सजिलो होस् भन्नाका खातिर बोकालाई उचालेर पिठयूमा बोकी घर जानलाई छिट्छिटो हिंड्न थाले । बाहुनलाई खाइलाग्दो बोकालाई पिठ्यूमा बोकेर हतारहतार हिंड्दै लगिरहेको तीनजना धूर्त ठगहरूले देखे । बोकालाई देखेर यस बोकालाई काटी पोलेर मासु खाइ जाडो छल्ने निधो गरे । अब बाहुनलाई ठगी कुन प्रकारले बोका हात पार्ने भन्नेबारे तीनैजनाले आपसमा सल्लाह गर्न थाले । सल्लाहअनुसार तीनजना ठगहरू बाहुन हिंड्दै गरेको बाटोमा एक/एक कोसको दूरीमा उभिएर बाहुनलाई ढुकेर बसे ।
बाहुन हिंड्दै जाँदा पहिलो ठग देखापर्‍यो । बाहुनलाई देखेर ठगले उनको अघिल्तिर आएर हात जोड्दै भन्यो,“बाहुन बाजे, नमस्कार छ । छि: छि: तपाईंले यो मरेको गधाको बच्चालाई किन बोकी हिंड्नुभएको हो कुन्नि । तपाईंजस्तो बाहुनले यस्तो अपवित्र लाश बोकेर हिंड्न ठीक भएन है । फालिदिनुस् यसलाई तथा नुहाएर चोखिनुस् ।” ठगको कुरा सुनेर बाहुनले रिसाएर भने,“तिमी अन्धो छौं कि क्या हो ? मैले बोकालाई बोकेको देखेनौं ?” बाहुन रिसाएको देखेर सो ठगले भन्यो,“रिसानी माफ होस् बाहुन बाजे । मैले तपाईंले जे बोकेको देखें सोही भनें । यसमा किन रिसाउने ? तपाईंको जो मर्जी, जे मन लाग्दछ त्यही गर्नुहोस् । मैले बित्थामा भनिदिएँ । म आफ्नो बाटो लाग्छु, ल १” यति भनेर ऊ आफ्नो बाटो लाग्यो । बाहुन आफ्नो बाटो हिंड्न थाले ।
दुई कोस पर गएपछि अर्को ठग बाहुनको अघिल्तिर आएर हात जोड्दै भन्यो,“बाहुन बाजे, नमस्कार छ । छि: छि: तपाईंले यो मरेको गधाको बच्चालाई किन बोकी हिंड्नुभएको हो कुन्नि । तपाईं जस्तो बाहुनले यस्तो अपवित्र लाश बोकेर हिंड्न ठीक भएन है । फालिदिनुस् यसलाई तथा नुहाएर चोखिनुस् ।” त्यसको कुरा सुनेर बाहुनले रिसाएर भने,“तिमी अन्धो छौं कि क्या हो ? मैले बोकालाई बोकेको देखेनौं ?” बाहुन रिसाएको देखेर सो ठगले भन्यो,“रिसानी माफ होस् बाहुन बाजे । मैले तपाईंले जे बोकेको देखें सोही भनें । यसमा किन रिसाउने ? तपाईंको जो मर्जी, जे मन लाग्दछ त्यही गर्नुहोस् । मैले बित्थामा भनिदिएँ । म आफ्नो बाटो लाग्छु, ल !” यति भनेर ऊ आफ्नो बाटो लाग्यो । बाहुन आफ्नो बाटो हिंड्न थाले ।
तीन कोस पर गएपछि तेस्रो ठग बाहुनको अघिल्तिर आएर हात जोड्दै भन्यो,“बाहुन बाजे, नमस्कार छ । छि: छि: तपाईंले यो मरेको गधाको बच्चालाई किन बोकी हिंड्नुभएको हो कुन्नि । तपाईंजस्तो बाहुनले यस्तो अपवित्र लाश बोकेर हिंड्न ठीक भएन है । फालिदिनुस् यसलाई तथा नुहाएर चोखिनुस् ।” त्यसको कुरा सुनेर बाहुनले रिसाएर भने,“तिमी अन्धो छौं कि क्या हो ? मैले बोकालाई बोकेको देखेनौं ?” बाहुन रिसाएको देखेर सो ठगले भन्यो,“रिसानी माफ होस् बाहुन बाजे । मैले तपाईंले जे बोकेको देखें सोही भनें । यसमा किन रिसाउने ? तपाईंको जो मर्जी, जे मन लाग्दछ त्यही गर्नुहोस् । मैले बित्थामा भनिदिएँ । म आफ्नो बाटो लाग्छु, ल १” यति भनेर ऊ आफ्नो बाटो लाग्यो ।
तेस्रो ठगले पनि अघिका दुईजना ठगहरूले भनेको भैंm भनेको सुन्दा बल्ल बाहुनको मुटुमा चिसो पस्यो,“होइन तीनजना बेग्लाबेग्लै मानिसले एउटै कुरा कसरी भन्न सके ? साँच्चिकै मैले बोकेको पशु मरेको गधाको बच्चा नै पो हो कि ।” बाहुनको मनमा भीषण द्वन्द्व उत्पन्न भयो,“यदि उनीहरूले भनेको कुरा सत्य हो भने वास्तवमा मजस्तो पवित्र बाहुनलाई महापातक निश्चय नै लाग्यो ।” किनकि शास्त्रमा भनिएको छ– रासभोष्ट्रौ विशेषेण तस्मात्तान्नैव संस्पृशेत् । अर्थात् ऊट र गधा अधिक अस्पृश्य हुन्छन्, त्यसैले यिनीहरूको स्पर्श गर्नुहुँदैन । यति विचार गरेपछि बाहुनले ह्ष्टपुष्ट खाइलाग्दो त्यस बोकालाई पिठ्यूबाट फाले । अनि आफ्नो बाटो हिंडेर गए तथा तीन ठगहरू त्यस ठाउँमा भेला भएर आफ्नो योजनाअनुसार काम फत्ते भएको देखेर रमाउँदै बोकालाई काटी खाए । त्यसैले भनिएको छ–
बहुबुद्धिसमायुक्ता: सुविज्ञानाश्लोत्कटा: ।
शक्ता वञ्चयितुं धूत्र्ता ब्राह्मणं छगलादिव ।।
अर्थात् अनेकौं प्रकारको चातुर्यले युक्त, अनेकौं उपाय जान्ने तथा छल गर्नमा निपूण मान्छेले जोसुकैलाई पनि सजिलै ठग्न सक्दछ । जस्तै बोकालाई बोकी हिंड्ने बाहुनलाई धूर्तहरूले ठगेर बोका हात पार्न सफल भए ।
(उमाशङ्कर द्विवेदी~ प्रतीक दैनिक पत्रिकाबाट)
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका एक कार्यकर्ता भारतमा पक्राउ
काठमाडौं । सर्लाहीमा गोली लागेर नेपाली कांग्रेसको कार्यकर्ता मारिएको घटनामा संलग्न भएको अारोपमा प्रहरीले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका एक कार्यकर्तालाई…
कोरियनको अवैध धन्दा
काठमाडौं । नेपालमा आउने विदेशीहरुमध्ये ठूलो संख्यामा कोरियन नागरिकहरु अवैध गतिविधिका लागि आउने गरेको खुलेको छ । कतिपय अपराध…
काठमाडाैं । हरेक साता दाहोरिँदै आएको पश्चिमी वायुको प्रभावले फेरि मुलुकभरको मौसम प्रभावित बनाएको छ । मौसमी प्रभाव आगामी…
मन्त्री रवीन्द्रका अंगरक्षकको पेस्ताेल खै ? सेनालाई तनाव
काठमाडौं । स्वर्गीय पर्यटनमन्त्री रवीन्द्र अधिकारीका अंगरक्षकको पेस्तोल हराएको छ । सेनाले अहिले अंगरक्षक अर्जुन घिमिरेको साथमा रहेको पेस्तोलको…
पण्डितविरुद्ध ओलीसम्मै उजुरी पुग्यो
काठमाडौं । पत्नीको नाममा लाखौं रकम रहेको सम्पत्ति विवरण बुझाएर विवादमा तानिएका संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्री लालबाबु…
८८ प्रतिशत खानेपानीमा दिसामा पाइने कोलिफर्म
काठमाडाैं । भक्तपुरवासीले प्रयोग गर्दै आएका ८८ प्रतिशत खानेपानीमा दिसामा पाइने कोलिफर्म पाइएको छ ।
जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालयले आयोजना गरेको…
टेकुमा उपचाररत दुई जनाको दोस्रो रिपोर्ट पनि पोजेटिभ 28 views